PressReader - Ilanga langeSonto: 2017-11-12 - Umshoza useyazazi uzofa nini
Umshoza useyazazi uzofa nini
Ilanga langeSonto - 2017-11-12 - Izithombe - ZAMA NDUKUNDE
NAKUBA kungekudala kakhulu ILANGA LangeSonto lichithe isikhathi laphola nonomasonto Maswanganyi, odume ngelikaMshoza, leli phephandaba liphinde futhi lathola isikhathi sokuba liphinde liphole naye ukuze lithole okunye okuqhubeka ngempilo yakhe.
Bambalwa osaziwayo abahlala isikhathi eside kakhulu endimeni yezikaqedisizungu kanti umshoza ungomunye wabaculi asebedonse isikhathi eside bekhona.
Ubeneminyaka eyi-15 ngesikhathi eduma ngengoma ethi Kortes. Kule ngoma ubepike umzambiya naye obesemncane ngaleso sikhathi.
Echaza ngale ngoma uyahleka, uthi: “Ngesikhathi ngicula le ngoma bengiseyinganyana, ngiyintombi nto, kodwa bengihlakaniphile. Bengazi ukuthi kukhona into okuthiwa wumjolo kodwa bengingajoli. Ngize ngaqala ukujola sengineminyaka engama-21.”
IMINYAKA YABO YOKUFA
Njengoba ekhuluma kanjena nje uhamba nesoka lakhe uthuthukani Mvula. Kuyacaca ukuthi uthando lusavutha amalangabi phakathi kwabo. Yize bengafuni ukukhuluma ngempilo yabo yangasese kodwa badalule unyaka abayofa ngawo.
“Sivumelene ngokuthi sizofa uma sesineminyaka engama-92. Kuzofa mina kuqala ngoba angifuni ukuba ngumfelokazi,” kuchaza umshoza.
Kungenelela uthuthuthukani othe: “Cha kuzomele kufe mina kuqala. Uma ungafa kuqala kusho ukuthi kuyomele ufe uneminyaka engama-82,” kuchaza uthuthukani.
Uma kukhulunywa ngomuntu osothandweni oluvutha amalangabi kukhulunywa ngomshoza.
“Uyazi ngendlela engijabule ngayo ngize ngabhalela isithandwa sami ingoma ethi Dankie Mabhebeza. Ngale ngoma ngibonga uthando anginike lona,” kusho umshoza.
USEWAKHOHLWA YISIQUMAMA UJACOB MNISI
Kuzokhumbuleka ukuthi umshoza uke washada nesiqumama esinguJacob Mnisi.
“Uyazi kwesinye isikhathi ngiyakhohlwa nokukhohlwa ukuthi ngike ngashada naye. Ngize ngikhunjuzwe yiwona amaphepha ngoba ayathanda ukuthi uma ebhala ematanise igama lakhe nelami,” usho kanje.
Uqhube wathi: “Uma ngibheka emuva akukho nokukodwa engingakushintsha ngempilo yami. Ngiwenzile amaphutha kodwa ngifundile kuwona.” Uthe enye inhlanhla abe nayo wukukhuliswa yizinkakha emkhakheni wezikaqedisizungu ezingasekho.
“Ngibe nenhlanhla ngoba ekukhuleni kwami benginabantu abafana nobrenda Fassie, Lebo Mathosa nomandoza.
"Bangikhulisile, bangenza ingane yabo futhi bekungabangani bami. Ngifisa bazi lapho bekhona ukuthi ngiyabakhumbula, ngiyabathanda, futhi ngiyohlezi ngiwuhlonipha umsebenzi wabo,” kubalisa yena.
Phakathi kwezinto athi uzifundiswe ngulebo Mathosa wukuthi ngaphandle kwemali awulutho.
“Ulebo ubejwayele ukuthi imali ngumama wakho. Ungifundise ukusebenza kanzima nokubekezela, nokuthi ngingalingiseli omunye umuntu,” usho kanje.
Uthe yibona futhi abamgqugquzela ukuba abhale umculo ongaphelelwa yisikhathi.
“Umculo wabo usemnandi namanje. Yingakho nami ngibhala umculo ongaphelelwa futhi ongadlulelwa yisikhathi.
Ngifunde kubona ukubhala umculo oxoxa ngempilo yami,” kulanda umshoza.
Ukhulume ngamasingili asanda kuwakhipha wathi:
“Kulezi zingoma engisanda kuzikhipha ngixoxa ngobunzima engike ngabhekana nabo, ubunzima bokulahlekelwa ngabantu engibathandayo.
"Enye yezingoma engizithandayo yilena ethi 'Abantu Bam’, engiyibhalele abalandeli bami. Yindlela engibabonga ngayo le ngokungeseka kwabo.”
Lo mculi uthi yize eyoqeda iminyakanyaka ekule ndima kodwa akaziboni ebeka phansi izintambo.
“Ngiyathanda ukubukela kubantu abangaphambi kwami, abantu abafana nomama uletta Mbuli, Caiphus Semenya, Bra Hugh nabanye ekudala beyibambile. Wubizo lolu, angiziboni ngibeka phansi izintambo, kunalokho ngizoqhubeka ngijabulise abantu kakhulu kunakuqala,” kubeka lo mculi.
“Kule minyaka esengiyihlalile ngifunde ukuthi ngeke uthandwe yiwona wonke umuntu. Kunabantu abasondela kuwe ngoba befuna udumo lwakho nje kuphela,” kusho yena, egcizelela ukuthi usemdala manje ngeke akhohliseke kalula.
Igama likamshoza like lasaphazeka emaphephandabeni nase- zinkundleni zokuxhumana ngenxa yokuzishintsha kwakhe isikhumba.
“Ngiyakuncamela ukuba abantu bangikhulume kabi ngoba angifuni ukudatshukelwa,” kubeka lo mculi.
Uqhube wathi: “Angizikhethelanga ukushintsha ibala kodwa benginesifo esaziwa ngokuthi yihyperpigmentation. Lesi sifo sidala amabala amnyama emzimbeni wonke futhi singahlasela noma ngubani noma nini. Udokotela wami wangiluleka ngokuthi indlela engcono yokwelapha lesi sifo wukuba ngikhanyise ibala lami ( skin lightening).”
Le ntokazi ithi kunomehluko phakathi kwe- skin bleaching neskin lightening.
“Ngesikhathi kuthiwa ngifuna ukufana nomichael Jackson angizange ngibe nendaba ngoba iqiniso bengilazi.
"Ngiyazi baningi ebebezitshela ukuthi lokhu ngikwenziswa yisitayela kodwa akunjalo, ngizama ukuhlenga impilo yami. Ngiyazi ukuthi bakhona abalandele emuva kwami bayokhanyisa ibala. Angibasoli futhi angibagxeki ngoba vele I'm a trend setter,” kuchaza umshoza.
USAZOQHUBEKA NOKULUNGISA ISIKHUMBA
Uthe usazobuyela ayoqhubeka nokwelashwa kwakhe.
“Ngenyanga ezayo ngizobuyela kudokotela ngiyoqhubeka nokwelashwa kwami kwesikhumba,” usho kanje.
“Iqiniso wukuthi bengisithanda isikhumba sami esimnyama. Ngaziwe ngiwumshoza omnyama, ngaba nezingane ngimnyama, ngashada ngimnyama nginjalo, kwakumnandi nje ngingenankinga nesikhumba sami. Izinkinga zami zaqala ngesikhathi sengikhulelwe,” kuchaza umshoza.
Ubuye waveza ukuthi vele amabele akhe uwalungisile.
“Amabele ami ngiwalungise emuva kokuthola ingane. Bekumele ngikwenze lokhu ngoba umzimba womuntu wesifazane uyashintsha emuva kokuthola ingane,” kusho yena.
Ebuzwa ukuthi isikhathi sakhe usichitha kanjani uthe: “Ngingumuntu othanda ukuzivalela endlini, ngifunde izincwadi. Kuyimanje ngifunda izincwadi ezimbili - enye yalezo zincwadi ngekagayton Mckenzie ethi Hustler's Bible.
"Isikhathi sami esiningi ngibuye ngisichithe nomndeni wami. Amagig ngiwabona ngama-weekend kuphela,” kuphetha lo mculi ozakhele igama endimeni yezikaqedisizungu kuleli.
IZITHOMBE NGU: ZAMA NDUKUNDE
UMSHOZA uthi akazishintshanga isikhumba ngoba ethanda kodwa uphoqwe yisimo.
NGUMSHOZA nesoka lakhe uthuthukani Mvula.
LAPHA yingesikhathi umshoza esokhozini FM nodudu Khoza, nosli Mqwebu.